Stakes vary depending on the game you are playing. To find out about the stakes foraparticular game you can access the "ကူညီပါ" screen from any game and find out information about stakes, ဆုကြေးငွေ, winlines and game rules.
On the participation date, You are must be over the age of legal consent as set by the law applying in the territory You are located in, and in any event You must be over 18 အသက်. Players must also haveavalid payment method in their own name.
From the login screen, enter your email address and then click on the link titled "Forgotten Password". ဤသည်သင့်အကောင့်ရက်နေ့တွင်မှတ်ပုံတင်အီးမေးလ်လိပ်စာရန်သင့် password ကို reset ဖို့ link တစ်ခုစလှေတျမညျ.
ဘယ်လိုငါသည်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကိုကို update ပါဘူး?
သင်လောင်းကစားရုံသို့ logged ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ကိုသုံးနိုင်သည် "ငါ့အကောင့်" သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဆို update လုပ်ဖို့ link ကို. သင်အကောင့်ပေါ်တွင်လိပ်စာသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ပြီး name ကိုပြောင်းလဲပစ်လျှင်သင်သည်အပိုဆောင်းစိစစ်အတည်ပြုပေးဖို့လိုပမေ.
ထုတ်ယူတောင်းဆိုမှုအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်3business days and once processed you will receive an email confirmation. Each bank has different timescales for processing payments but generally funds should be in your account within7စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံး.
Withdrawals by Wire Transfer haveaminimum limit of £/$/€50 or 500kr, all other withdrawal methods haveaminimum limit of £/$/€20 သို့မဟုတ် 200kr. For more information on making withdrawals from your account, please see our Cashing Out and Withdrawal Policy pages.
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က Windows Operating Systems ကဗားရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ် TopSlotSite 2000 နှင့်အထက်နှင့် Flash ကိုဗားရှင်း9သို့မဟုတ်အထက်. အဆိုပါလောင်းကစားရုံ software ကို Windows ကို 9X ထောကျပံ့ပေးမထားဘူး, 3.XX သို့မဟုတ်က်ဘ်တီဗီ. အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်, ရန်သင့် Monitor ကိုသတ်မှတ်ထား 1024 X ကို 768 pixels ကိုနှင့်မြင့်မားအရောင် (16 bit နဲ့) သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို.
ဟုတ်ကဲ့, အ TopSlotSite လောင်းကစားရုံသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျယခု iPhone နှင့် Android ဖုန်းစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာကစားနိုင်.
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် cookies တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါနဲ့?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie ကိုအသုံးပြုမှုမူဝါဒများနှင့်အခြား privacy ကိုသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး privacy page.
A number of our online casino games offer the chance for players to play the games in "အခမဲ့ Play စ" mode which allows you to getafeel for how the game plays before trying your luck and playing for real money.
Most casino games are fun to play and can provide many hours of entertainment. သို့သော်, probably the most fun casino games can be found in our casual games section with great games such as Crown and Anchor, Beerfest and Cashapillar to name butafew.
All of our roulette games havea"အခမဲ့ Play စ" option allowing you to play the games completely for free without riskingapenny of your own money. Once you're up to speed with how to play the game you can choose to play for real money at any time.